In kasta oo kala duwanaanshaha u dhexeeya waddammada uu yahay mid xiiso leh, hadana sababaha keena in dad badan ay ganacsi bilaabaan ayaa ah, waxay rabaan inay lacag sameeyaan. Dabcan, lacagta ma’ahan wax walba, sidaa darteed ma aha hantida kaliya dhiirrigelinta ay leeyihiin ganacsatada. Dadka qaar waxaa ka guuxaayo fikrado ganacsi, qaarna waxaad u malaynaysaa in loogu talagalay inay noqdaan ganacsato. Laga soo bilaabo marka ay ka soo gudbeen iskuulka, ama laga yaabee xitaa intaas ka hor, waxay u gaajaysan yihiin inay bilaabaan ganacsi oo ay u horseedaan guul la taaban karo. Dadka kale qaarkiis, bilaabida ganacsi waxay u tahay …